A na-eji jelii ntụ mee nke carrageenan, konjac gum, glucose na ihe oriri ndị ọzọ, ọ bụ ezigbo ihe ngwọta iji me jelii. Site n'iji carrageenan jikọtara ya na ihe ndị ọzọ, jelii ntụ nwere ike ịnwe njirimara nke coagulation, njigide mmiri ma mee ka jelii dị nro. Jelii ntụ ntụ bụ ụdị eriri nri dị elu nke nwere mmiri nwere ike ịgbanye mmiri, nke ghọtara ọrụ nlekọta ahụike n'ụlọ na mba ofesi. Ọ nwere ike n'ụzọ dị irè ichu oké metal atọm na redioaktivu m ...
Agaro Oligosaccharide Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide nwere ụfọdụ pụrụ iche ndu eme, dị ka mgbochi ọxịdashọn, mgbochi mbufụt, mgbochi nje na mgbochi nke colitis, wdg. Product na-amịpụtara na-esichara site na nkà mmụta sayensị nhazi technology, àgwà bụ n'ụzọ zuru ezu kwekọrọ gaa n'ụkpụrụ mba na EU. Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide bụ ụdị oligose na ogo nke polymerization (DP) nke 2 ~ 12 mgbe hydrolysis, nke nwere obere vis ...
Agarose bụ polymer linear nke ihe owuwu ya bụ ogologo usoro nke 1, 3-linked β-D-galactose na 1, 4 jikọtara 3, 6-anhydro-α-L-galactose. Agarose n'ozuzu na-agbaze na mmiri mgbe ọ dị ọkụ karịa 90 ℃, ma mepụta ezigbo gel siri ike mgbe ọnọdụ okpomọkụ gbadara na 35-40 ℃, nke bụ isi ihe na ntọala nke ọtụtụ ojiji ya. Njirimara nke agarose gel na-egosipụtakarị na ike gel. Ike dị elu, nke ka mma ịrụ ọrụ gel. Agarose di ocha di ofte ...
Carrageenan a nụchara anụcha Fujian Global Ocean kappa carrageenan bụ nke a kwadebere site na algae na-acha uhie uhie - Eucheuma, site na ɑ (1-3) -D-galactose-4-sulfate na β (1-4) 3,6-akpịrị ịkpọ nkụ-D ọkara akụkụ akụkụ sulfate. nke lactose. Ejirila sayensị wee gosipụta ngwaahịa a yana ogo ngwaahịa a na-akwado ụkpụrụ mba China na EU. Njirimara chemical ● Solubility: enweghị ike ịgba mmiri n'ime mmiri oyi, mana ọ nwere ike gbaba n'ime ngọngọ nke gluu, ihe anaghị edozi na ihe ndị na-edozi ahụ, eas ...
Ọkara Carrageenan nụchara anụcha
Fujian Global Ocean kappa carrageenan bu nke edoziri site na algae-Eucheuma, site na ɑ (1-3) -D-galactose-4-sulfate na β (1-4) 3,6-akpịrị ịkpọ nkụ-D ọkara nke otu akụkụ sulfate nke lactose . Ejirila sayensị wee gosipụta ngwaahịa a yana ogo ngwaahịa a na-akwado ụkpụrụ mba China na EU. Njirimara chemical ● Solubility: enweghị ike ịgbanye na mmiri oyi, mana ọ nwere ike ịba n'ime ngwugwu nke gluu, nke na-adịghị edozi na ihe ndị na-edozi ahụ, na-adị mfe soluble na w ...
Soft swiiti ntụ ntụ na-abụkarị ogige dị iche iche, dịka iji ihe oriri na jelii, agw dabere na swiiti ntụ nwere ikike gel dị ukwuu. Ọ ga - ekwe omume ime ka swiiti dị nro nwee ike gelatinization, nghọta dị elu, kristal doro anya, ike siri ike na uto siri ike site na ijikọta agar-agar, carrageenan na ihe ndị ọzọ. , ezi nghọta, obere mmako ego, ala na-eri, adjusta ...
Beer Clarifying Agent na-amịpụtara site na oke mma mmiri algae. Dị ka ngwaahịa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, United Nations Food Agriculture Organisation anabatala nchekwa ya. Mmetụta nke onye na-akọwapụta wort na-arụ ọrụ bụ ịmịkọrọ protein nke wort, wepụ nitrogen congealable, mee ka biya doo anya ma yigharịa ndụ ndụ biya. Onye na-ahụ maka biya biya nwere ụdị abụọ: granulu na ntụ. O nwere njirimara nke iji ya dị mfe, ụgwọ dị ala yana mmetụta pụtara ìhè, yana ọ nwere ike rụọ ọrụ nke ọma na ee e ...